Ny sakramentan'ny – 2trondro
Home / Fiangonana / Ny sakramentan'ny
Araka ny anarany dia midika, ny sakramenta, naorina fombafomba masina ao amin'ny Fiangonana Jesosy. Araka ny tokony ho miteny, Misy fito ny sakramenta ao amin'ny finoana katôlika: Batisa, Ny fandraisana ho mpikambana, ny Eokaristia, Fiaiken-keloka, Fanambadiana, Baiko, ary ny Fanosorana ny marary.
Alalan'ny sakramentan'ny mpino handray ny fahasoavany izy noho ny zavatra ara-nofo toy ny rano, mofo, divay sy ny diloilo.
Ny sakramenta dia azo takarina toy ny famantarana ivelany izay mampita ny fahasoavana izy ireo maneho. Rano, ohatra, midika fahadiovana sy ny fiainana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ny ranon'ny batisa tena hanadio ny fanahy ny fahotana ary fenoy avy amin'Andriamanitra ny fiainana (jereo Filazantsaran'i Jaona, 3:5, ary ny Asan'ny Apostoly, 2:38). Ny sakramenta dia ny modelin'ny araka ny Fahatongavana ho nofo, izay Andriamanitra, maha ara-panahy, naka amin'ny olombelona nofo–ary ny tsy hita maso iray niseho.
Ny hevitra ny fahasoavana ho nafindra amin'ny alalan'ny zavatra ara-nofo no ara-Baiboly hevitra.
Ao amin'ny Testamenta Vaovao irery, hitantsika ny rano nampiasaina tamin'izany fomba izany (indray, jereo John 3:5; 9:7; Asan'ny Apostoly, 8:37; Paoly Taratasy ho an'i Titosy 3:5; na Petera Taratasy Voalohan'i Md 3:20 – 21); ary koa ny solika (jereo ny Filazantsaran'i Marka 6:13, na ny Taratasy James 5:14); tanimanga (jereo John 9:6); fitafiana (Mark 5:25 na Luke 8:43); ka dia ny mosara (jereo ny Asan'ny Apostoly 19:11-12).
Ny fahasoavana no mifindra amin'ny alalan'ny zavatra manan-tsaina hafa, koa, toy ny feon'i Maria sy Petera aloky (jereo ny Filazantsaran'i Lioka 1:41, 44, ary ny Asan'ny Apostoly 5:15, tsirairay avy).